Ithuluzi Lokubuyisela Idatha. Buyisela uLost & Amafayela Asusiwe.
DataNumen Data Recovery iyona best ithuluzi lokutakula idatha emhlabeni. Ingalulama lost futhi ususe amafayela namafolda kumadrayivu akho ngangokunokwenzeka, ngaleyo ndlela unciphisa ukulahleka ezinhlekeleleni zedatha.
4.90 / 5 (kusuka kumavoti angu-1,643)
Kungani DataNumen Data Recovery?
Khetha Umthombo IDrayivu noma iDiski
Khetha Izinketho Zokutakula
Izici eziyinhloko ku DataNumen Data Recovery v2.4
Sekela zonke izinhlobo zezinhlelo zefayela, kufaka phakathi NTFS, FAT, FAT32 no-Ext2.
Ukusekela ukuthola amafayela lost ngenxa yokuguqulwa kabusha kwedrayivu, inkohlakalo yedrayivu noma ezinye izizathu.
Ukusekela ukuthola amafayela asusiwe.
Ukusekela ukuthola imifudlana ehlotshaniswa ne-lost futhi ususe amafayela.
Ukusekela ukuskena idatha yediski eluhlaza ngokuphelele futhi useshe i-lost futhi ususe amafayela ezinhlobo ezingaphezu kuka-70 ezaziwayo, ngokusebenzisa uhlelo lochwepheshe lwangaphakathi olunolwazi olunzulu mayelana nezici nezakhiwo zokucaciswa kohlobo lwefayela.
Ukusekela ukuthola amafayela asusiwe ekuvuseleleni umgqomo.
Ukusekela ukuthola kabusha i-lost namafolda asusiwe nayo yonke ifolda hierarchy eziphindayo.
Sekela amagama wefayela le-Unicode namagama efolda.
Ukusekela ukuqamba kabusha amafayela namafolda ngokuzenzakalela lapho impinda ikhona.
Sebenzisa isikhombimsebenzisi esibonakalayo esilula ukukufundisa ukuthi ubheke inqubo yokutakula kalula nangempumelelo.
Ukusekela ukuhlunga nokuhlunga i-lost futhi ususe amafayela namafolda ngokuya ngemibandela ehlukahlukene.
Ukusebenzisa DataNumen Data Recovery Ukubuyisa Amafayela KuDrayivu Yakho
Ufometha idrayivu yakho ngephutha, ususe unomphela amafayela noma amafolda kumadrayivu akho ngephutha, noma ukhiphe umgqomo wakho wokuphinda usebenzise kabusha ngaphambi kokuthola ukuthi kukhona okubalulekile kuwo. Yini ongayenza?
Azikho izinkinga. DataNumen Data Recovery ingakusiza. Ungasebenzisa leli thuluzi elinamandla ukuskena amadrayivu, useshe i-lost futhi ususe amafayela, uwathole futhi uthole i-most idatha ebalulekile ebuyiselwe kuwe.
Ungakhetha idrayivu noma idiski ezoskenwa, bese uchofoza inkinobho ethi "KULUNGILE" ku- starinqubo yokuskena.
Qaphela: Ngaphambi kokuthwebula idrayivu noma idiski, qiniseka ukuthi awekho amafayela noma amafolda kudrayivu noma kudiski ayavulwa. Futhi azikho ezinye izinhlelo zokusebenza ezifinyelela kudrayivu noma idiski.
Ngenye indlela, ungakhetha into elandelayo yemenyu:
ukuskena ifayela lesithombe esikhundleni sedrayivu noma idiski.
Ungakhetha futhi le nto yemenyu:
ukuvula ibhokisi elilandelayo:
bese usetha izinketho zokuskena ngaphambi kwenqubo yokuskena.
Ngemuva kuka-starting inqubo yokuskena, ibha yokuqhubeka
izokhombisa inqubekela phambili yokuskena. Ngesikhathi senqubo, ungachofoza
inkinobho ukumisa inqubo yokuskena.
Ngemuva kwenqubo yokuskena, uma kukhona i-lost namafayela noma amafolda asusiwe ayatholakala, uzobona ukubuka kuqala kwalawa mafayela:
Bheka amafayela noma amafolda ofuna ukuwalulama, bese uqhafaza
inkinobho, uzobona ibhokisi elilandelayo:
Ungasetha umkhombandlela wokukhipha kungxoxo bese uqhafaza inkinobho ethi "KULUNGILE" ku- start ukuthola izinto ezihloliwe.
DataNumen Data Recovery izokubuyisela zonke izinto ezihloliwe. Ngemuva kwenqubo yokutakula, ibhokisi lomyalezo elilandelayo lizovela:
Ngemuva kwalokho ungavula umkhombandlela wokukhipha bese ufinyelela kuzo zonke izinto ezitholakele.
DataNumen Data Recovery 2.4 ikhishwa ngoNovemba 9, 2020
DataNumen Data Recovery 2.3 ikhishwe ngo-Ephreli 14, 2020
Thuthukisa umphumela wokubonisa.
DataNumen Data Recovery 2.2 ikhishwe ngoFebhuwari 28, 2020
Ukusekelwa kokuhlola amafayela angawatholwa.
Ukusekela ukulungisa osayizi bezithombe.
DataNumen Data Recovery 2.1 ikhishwa ngoJanuwari 8, 2020
DataNumen Data Recovery 2.0 ikhishwa ngoSepthemba 19, 2019
Bhala kabusha injini yokuskena nokuthola kabusha.
DataNumen Data Recovery 1.0 ikhishwa ngoDisemba 28, 2010
Ukusekelwa kuwo wonke amafomethi amadrayivu.
Phinda ususe amafayela ku- NTFS ukushayela.